DHAGEYSO WARAYSI:Jiidaha Tukaraq oo dagaal culus ka dhacay & Ciidamada Puntland oo gudaha u galay saldhigyo Somaliland leedahay + Madaafiic xoogan oo…. posted on September 23, 2018
DEG DEG: Dagaal culus oo ka socda agagaarka Ceerigaabo iyo Hub culus oo la maqlayo. posted on September 23, 2018
DAAWO: M/weynaha Puntland oo ka jawaabay eedihii wasiirkii hore ee Deegaanka Puntland usoo jeediyey, magacaabayna wasiir cusub. posted on September 23, 2018
DHAGEYSI XASAASI AH: Wasiirkii Deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland oo faahfaahin ka bixiyey Is casiladiisa? posted on September 23, 2018
CADEYN: Wasiirkii Deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland oo is casilay, kuna dhawaaqay ujeedada Iscasiladiisa posted on September 23, 2018
DEG DEG+DAAWO: Taliye oo katirsan Jabhadda Caare oo faahfaahin ka bixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen Somaliland posted on September 23, 2018
Dagaal ka dhacay Tukaraq & Wararkii u dambeeyey posted on September 23, 2018
DHAGEYSO: Faahfahin ku saabsan Dagaalo mar kale dhexmaray ciidamada Somaliland & Jabhadda Col, Caare posted on September 23, 2018
CADEYN: Galmudug oo si adag uga jawaabtay Dhambaal uga yimi Villa Somalia, kuna dhawaaqday… posted on September 23, 2018
DAAWO:Tukaraq oo jilbaha la isku aastay & Puntland oo dagaal ku idlaysay saldhigyada Somaliland + Saraakiil sare oo….. posted on September 23, 2018
Maxamed sulub on DAAWO:Tukaraq oo jilbaha la isku aastay & Puntland oo dagaal ku idlaysay saldhigyada Somaliland + Saraakiil sare oo…..
Abdiweli on DHAGEYSI XASAASI AH: Wasiirkii Deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland oo faahfaahin ka bixiyey Is casiladiisa?
Abdiweli on DAAWO: M/weynaha Puntland oo ka jawaabay eedihii wasiirkii hore ee Deegaanka Puntland usoo jeediyey, magacaabayna wasiir cusub.
Abdiweli on CADEYN: Galmudug oo si adag uga jawaabtay Dhambaal uga yimi Villa Somalia, kuna dhawaaqday…